Ngathi-ii-Leadpacks (Xiamen) zokuKhuselwa kokusiNgqongileyo ukupakisha Co., Ltd.
Leadpacks (Xiamen) ukhuselo lokusingqongileyo ukupakisha Co., Ltd. yasekwa ngo-2009 kwaye lizimisele ukuphakheja zeplastiki. Ukuqala kophando kwiingxowa ezinokuboliswa ziintsholongwane ngo-2014, kwaye kwaqaliswa ngokusesikweni ukuveliswa kweebhegi ezinokuboliswa ziintsholongwane nezinokuthenjwa ngo-2016. Sikwafumaneke noluhlu lweziqinisekiso ezinxulumene noko i-DIN EN13432 eqinisekisiweyo, i-ISO eqinisekisiweyo, ingxelo yovavanyo lwe-FDA, i-SGS kunye neepatent njl.
Umzi-mveliso wethu ugubungela indawo engaphezulu kwe-6000 yeemitha zesikwere kwaye ine-matshini engaphezulu kwe-50, kubandakanya oomatshini befilimu, imibala ye-11-oomatshini bokushicilela abakhawulezayo, oomatshini bokwenza ibhegi, njl.njl. Oku akupheleli nje ekunciphiseni iindleko zokuvelisa kunye namaxabiso, kodwa kukwaphucula ngempumelelo imveliso kunye nomgangatho wemveliso. Vumela abathengi bethu bafumane elona xabiso liphezulu kunye nomgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo.
"Imveliso ekhuselekileyo, uMgangatho wokuqala" yifilosofi yethu yefektri. Sineqela labasebenzi bezobuchwephesha ababandakanyeka kumava emveliso iminyaka emininzi kolu shishino kunye neQC yobungcali, sinesiqinisekiso esithembakeleyo seemfuno ezikumgangatho ophezulu, udumo oluphumeleleyo lokuphumelela luye lwaphumelela abathengi abavela kumazwe angama-58 nakwimizi-mveliso eyahlukeneyo.
Iimveliso zethu eziphambili 100% iingxowa ezinokuboliswa ziintsholongwane, iingxowa Compostable, izingxobo zeplastiki, izingxobo zeplastikhi ukupakisha, iingxowa Shopping, iingxowa ngeposi, iingxowa uziphu, Zip lock iingxowa, Yimani iingxowa, iingxowa Umshini, ingxowa Ukutya, iingxowa zekofu, iingxowa ngefoyile ye-Aluminium, inkunkuma ingxowa, Yolula ifilimu, iRoll roll njl.
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezahlukeneyo zabathengi abohlukeneyo, sineqela loyilo lobuchwephesha, imigca yokuvelisa yokuqala, kunye nenkonzo ye-intanethi yeeyure ezingama-24. Inkonzo yokupakisha yokumisa enye inokuhlangabezana nazo naziphi na iimfuno zakho zokupakisha.
Bonke abasebenzi bayakwamkela ukuba undwendwele kwaye ukhokele umzi-mveliso wethu.
Sikwafumene uthotho lweziqinisekiso ezinxulumene ne-DIN EN13432 eqinisekisiweyo, i-ISO, i-FDA, i-SGS kunye neepatent njl.